हनिमूनपछि थाहा भयो कि ? पति ‘नपुंसक’ छ – Khash Khabar
हनिमूनपछि थाहा भयो कि ? पति ‘नपुंसक’ छ
काठमाडौं । भारतको उत्तर प्रदेशको शाहजहाँपुरमा एउटा डरलाग्दो घटना बाहिर आएको छ । हनिमुनमा बेहुलीले श्रीमानलाई नपुंसक भनेपछि ससुराले कुटपिट गरेको घटाना बाहिरीएको हो । महिलाले श्रीमान्सहित ससुरा पक्षका ८ जनाविरुद्ध ठगीलगायत विभिन्न धारामा मुद्दा दायर गरेकी छन् । हाल प्रहरीले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
वास्तवमा, पुवायन थाना क्षेत्रकी एक युवतीको विवाह ५ जुनमा थाना सदरबजार क्षेत्रका एक युवकसँग भएको थियो।यस विवाहमा बेहुलीका परिवारले १० लाख दाइजो पनि दिएका थिए । हनिमुनको दिन दुलहीले आफ्नो श्रीमान नपुंसक भएको थाहा पाइन् । जब दुलहीले भाउजुलाई यो कुरा भनिन् तब उनका ससुराले उनलाई कुटपिट गरे ।
ससुराले कुटपिट गरेको र यो कुरा कसैलाई बताएमा मार्ने धम्की दिएको महिलाको आरोप छ, त्यसैले उनी डरले चुप लागेर बसिन् । जब महिला आफ्नो घरमा आइन्, उनले यो सबै घटना परिवारका सदस्यहरूलाई सुनाइन्। उजुरीपछि प्रहरीले श्रीमान्, ससुरा, भाउजु र जेठाजुसहित आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
यस मामिलामा, एसपी ग्रामीण सञ्जीव बाजपेई भन्छन् कि एक श्रीमतीले आफ्नो श्रीमान् र ससुराले ठगी गरेर केही कुरा लुकाएको आरोप लगाएकी छिन् । उनले दाइजो मागेर कुटपिट गरेका थिए । यस विषयमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान भइरहेको छ । यसअघि मध्य प्रदेशको शिवपुरी जिल्लामा हनिमुनपछि श्रीमान्–श्रीमतीबीच झगडाको अर्को घटना बाहिर आएको थियो । हनिमुनको समय आयो, जब अचानक दुलहाले दुलहीको पेटमा टाँका देखे ।केही शंका थियो तर श्रीमानले केही बोलेनन् ।परम्परा अनुसार विवाह भएको केही दिनपछि श्रीमती आफ्नो मामाघरमा गइन् ।तर धेरै दिन बितिसक्दा पनि श्रीमान लिन गएनन् ।
यता श्रीमतीले श्रीमान विरुद्ध दाइजो दुव्र्यवहारको उजुरी दिएकी छिन् । विवाहअघि श्रीमतीको पनि अशोकनगरको निजी अस्पतालमा उपचार भएको अनुसन्धानमा संलग्न श्रीमानले थाहा पाए । यसका लागि श्रीमानले सूचनाको अधिकार आरटीआई को सहारा लिनुभयो । आरटीआईबाट प्राप्त जानकारी देखेर उनी छक्क परे ।
बालेनको र्चचा भारतमा पनि !
भारतमा आरआरआर को क्रेजः सिनेमाघरहरूमा सुरक्षा कडा, हलको पर्दा जोगाउन काँडेतार